सरकोडोसिसका लागि धन र जागरूकता बढाउनको लागि हामी तपाईंलाई धन उगाहने कार्यक्रममा भाग लिन चाहन्छौं! तल उपलब्ध उपलब्ध केही रोमाञ्चक घटनाहरू हेर्नुहोस्
तपाईं एक नायक हुन सक्नुहुन्छ! राम्रो कारणको लागि कोष सङ्कलन एक शानदार अनुभव हो। SarcoidosisUK सर्पोडोसिसको उपचारमा अत्यावश्यक अनुसन्धानको लागि धन उठाउन हाम्रो लक्ष्यमा हामीलाई सहयोग गर्न मद्दत खोज्दै हुनुहुन्छ। हामी यसलाई एक्लै गर्न सक्दैनौं!
हाम्रो द्वारा समर्थित ... सबै तरिका
एक कोष सङ्कलन गाइड र जानकारी प्याक प्राप्त गर्नुहोस्
ठूलो दिनको लागी एक व्यक्तिगत SarcoidosisUK शीर्ष प्राप्त गर्नुहोस्
ब्रिटिश लुंग फाउंडेशनको साथ हाम्रो साझेदारीको माध्यमबाट सबै दानहरू प्राप्त हुन्छन् DOUBLED र sarcoidosis अनुसन्धान मा निवेश। यदि तपाईं हाम्रा घटनाहरू मध्ये एक भाग लिन चाहानुहुन्छ भने, कृपया तलको बटनमा क्लिक गरी आफ्नो रुचि दर्ता गर्नुहोस् - हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडै फिर्ता पुग्नेछौं।
तपाईंको रुचि रजस्टर गर्नुहोस्!
विभिन्न शारीरिक कठोर र चासोहरू व्यक्तिहरूको लागि प्रदान गरिएका अवसरहरू।
यसमा 5Ks, 10 कि.मी., अर्ध मराटानहरू, पूर्ण मराथन र बाधा दौड जस्ता चुनौतीहरू समावेश छन्।
चालु घटनाक्रम क्यालेन्डर
साइकल चलाउने चुनौतीहरू:
ती व्यक्तिहरूको लागि जुन चक्र भए पनि दौडिन्छ, हामीसँग विभिन्न भौतिक क्षमता र चासोहरूसँगको लागि प्रदान गर्ने अवसरहरू छन्।
ठूलो कारणको लागि पैसा उठाउँदै पेडलिंग गर्दा दृश्यहरू अन्वेषण गर्नुहोस्।
यसमा मजा सवारीहरू, कोस्टलाई तट सवारी र साथसाथै ठूला बाइक सवारी जस्ता चुनौतीहरू समावेश गर्दछ।
प्रूडेंशियल राइड लन्डन - सर्री
साइकल यात्रा कार्यक्रमहरू क्यालेन्डर
साँचो स्पार्टार्न्सहरू र एड्रेनालिना जंकनहरूको लागि अवसरले उनीहरूको बल र बहादुरी देखाउँछ (वा जो कि केवल लामो पैदल यात्राको आनन्द लिन्छ)।
यसमा ट्रिथलन्स, स्किइडाइविंग र बगे जम्पिङ र ट्रेक्स जस्ता चुनौतीहरू समावेश छन्।
(स्किइडाइविंग र बगेज जम्पिङ कार्यक्रममा देखा पर्दैन तर घटनाहरू यदि सोध्नुभयो भने घटनाहरू प्रदान गरिनेछ।
खेलकुद घटनाक्रम क्यालेन्डर
यदि तपाईंले घटना पत्ता लगाउनुभयो भने तपाइँलाई लिङ्क गरिएको छैन जुन चासो छ, हामीलाई थाहा दिनुहोस् र हामी के गर्न सक्छौं हामी देख्न सक्छौं!